Global Voices teny Malagasy » Sina: Nitokona Ireo Mpamily Fiarakaretsaka Sy Ireo Mpiasan’ ny Làlamby. · Global Voices teny Malagasy » Print
Sina: Nitokona Ireo Mpamily Fiarakaretsaka Sy Ireo Mpiasan’ ny Làlamby.
Voadika ny 15 Aogositra 2011 13:29 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Zhang Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanoherana, Sendikà
Onjam-pitokonana vaovao iray indray no nitranga tao Sina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy teo anivon'ireo mpasa mpifindra monina avy any ambanivohitra miasa aminà toeram-piasana tsy ara-dalàna ireny, fa teny anivon'ireo mpamily sy mpiasa amin'ny sehatra fitaterana an-tanàn-dehibe. Maneho izany hoe hatraiza ny fiantraikan'ny fitontongan'ny sandam-bola sy ny fidangan'ny vidim-piainana amin'ireo olona monina an-tanàn-dehibe izay miharatsy hatrany ny fiainana mahazatra azy.
Mpamily fiarakaretsaka mitokona ao Hangzhou
Efa ho telo andro izay no nanombohan'ireo mpamily fiarakaretsaka ny fitokonany tao Hangzhoua , tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritra Zhejiang ao atsinanan'i Sina, ny 1 Aogositra 2011…..
Chen Jieren, mpanao tsikeram-baovao malaza amin'izao fotoana sady mpitoraka bilaogy kiritika ao amin'ny Weibo, dia nitatitra  ny 2 Aogositra:
Maherin'ny 8.000 ireo mpamily fiarakaretsaka nandray anjara tamin'ny fitokonana tao Hangzhou.
[Ny fitokonan'ireo mpamily fiarakaretsaka tao Hangzhou dia nahazo valiny somary mahafa-po ihany] Ny 1 Aogositra, nanao fihetsikettsehana ireo mpamily fiarakaretsaka ao Hangzhou manohitra ny halafon'ny vidin-tsolika sy ny hofan'ny fiara, fiarakaretsaka maherin'ny 8.000 no nihazo ny fihetsiketsehana vao maraina be. Ny tolakandro, nilaza ny governemanta fa handroso fepetra roa izy ireo: 1. Fanitsiana ny saran'ny fiarakaretsaka ny faran'ny Ôktôbra; 2. Ny governemanta dia hanome 1 yuan isaky ny fihodinana iray ho an'ny mpamily. Mety mbola hanohy ny fitokonana ireo mpamily, raha tsy mahafa-po azy ireo ny fepetra vaovao.
Araka ny voalazan'ny Reuters, ireo mpamily mpitokona dia tsy afa-po  tamin'ilay tolotra , ka mbola nanohy ny fitakiany izy ireo. Mbola nitatitra ihany koa ny Reuters fa manàmbana ny handefa tsikera ao amin'ny Weibo ireo mpamily izay nosakanana na nafindra, ary ireo haino aman-jery ao an-toerana dia nandà ny hitatitra ilay fitokonana.
Nanazava  ny antony tao ambadik'ilay fitokonan'ny fiarakaretsaka i Zhang Kai, mpisolovava momba ny zon'olombelona :
Azo nojerena mialoha ihany ny fitokonan'ireo mpamily fiarakaretsaka tao Hangzhou. Tany am-piandohan'ity taona ity, raha nihazo an'i Hangzhou aho, hitako fa tena sarotra ny nanakana fiarakaretsaka. Nilaza tamiko ny mpamily fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy avy eo an-toerana ary ny vola miditra amin'izy ireo isam-bolana dia latsaky ny 2.000 RMB ($250 USD). Noho izany tsy afaka manefa ny saran'ny fitsaboana na loza iray ianao. Maherin'ny 10.000 RMB isaky ny iray metatra tora-droa ny vidin-trano ao Hanzhou, na hanangona mandritra ny androm-piainana aza tsy hahafahanao mividy efitrano iray.
Tao amin'ny Weibo ihany, @hzhouse nanasongadina  fa ny olana momba ny fitrandrahana ny fahazon-dalana hitàna orinasa mampiasa fiarakaretsaka dia tsy mbola voavaha:
Io maraina io, nanao fitokonana ireo mpamily fiarakaretsaka. Mitaraina noho ny fitohanana sy ny fidiram-bola kely izy ireo. Manodidina ny 500 RMB(USD $80)no azon'izy ireo amin'ny andro fiasana iray, nefa tsy maintsy mandoa 220 RMb amin'ny orinasa tompon'ny fahazoan-dàlana hanao fitaterana amin'ny fiarakaretsaka ary RMB 200 ho an'ny solika. Ny tena afa-karatsaka raisin'izy ireo izany dia eo ho eo amin'ny 70-80 RMB ( $12 USD). Raha anesoranao ny hofan'ny fiara sy sakafo, dia tsy misy tavela intsony. Ny ankamaroan'ny tatitr'ireo haino aman-jery dia niresaka momba ny halafon'ny vidin-tsolika, ny fitohanan'ny fiara ary ireo famatsiam-bola kely. Ahoana ny momba ny vola aloa amin'ny orinasa tompon'ny fahazoan-dàlana? Nahoana no ireo olon-tsotra foana no ihandronan'ny rihitra?
Ny fari-piainan'ny fianakaviana mpamily fiarakaretsaka iray ao Hangzhou.
Sary maromaro mampiseho ny fari-piainan'ny fianakaviana mpamily fiarakaretsaka iray no nahasarika ny sain'olona maro tao amin'ny Weibo (avy amin'i @ 2074609565 ).
[Kamera] Ny fari-piainan'ny mpamily fiarakaretsaka ao Hangzhou: Andriamatoa Lam Mpamily ao Quchang, ny tena fiaviany dia avy ao amin'ny faritr'i Dongbei. 49 taona ary ny vadiny dia 46. Manana zanaka lahy 23 taona. Ny razan'izy ireo dia nipetraka tao amin'ny tanànan'i Huzhou Caima hatramin'ny nahatongavany tao Hangzhou. Matory aminà farafara iray izy ireo. 10 metatra tora-droa ny haben'ny efitranony miampy ny trano fidiovana. Manodidina ny 1500 RMB ny vola miditra aminy isam-bolana, 1100 ny hofan-trano ankoatry ny vidin-jiro sy rano. Hoy ity mpamily sady nihanihany” lazain'ny olona fa paradisa i Hangzhou, kanefa ny zavatra niainako dia helo”
Ny 3 Aogositra, @zhaxuchu dia nitsikera  ny fepetra voalohany naroson'ny ben'ny tanàna ho fampitoniana ho valin'ny fitokonan'ireo fiarakaretsaka :
[ Tsy hisy fitoniana raha tsy manan-kohanina ny olona] Vokatry ny fiakaran'ny vidin-tsolika, dia tsy afaka mampidi-bola ireo mpamily fiarakaretsaka hany ka niditra tamin'ny fitokonana. Nilaza ny ben'ny tanànan'i Hangzhou Zhao jianwei fa tokony hiaro ny zon'ny ankamaroan'ireo mpamily fiarakaretsaka ny governemanta mba hampandeha tsara ny fidiram-bolan'izy ireo amin'ny fanerena ireo vitsy an'isa hatrany ifotony. Tokony hanamontsana azy ireo tsirairay ry zareo o ho fampitoniana ny fiarahamonina—ry ben'ny tanànako, ny faritry ny fitoniana dia ny fanànana fidiram-bola ampy ho an'ny sakafo. Moa ve fantatrao fa tena vitsy amin'izao fotoana ny olona maniry ho lasa mpamily?
Ny fitokonan'ny mpiasan'ny làlamby ao Changsha.
Nanao fitokonana teo amin'ny Garan'i Changsha  ao amin'ny faritanin'i Hunan, atsimo afovoan'i Sina koa ireo mpiasan'ny orinasan-dàlamby ny 2 Aogositra 2011. Tena saropady tokoa ity hetsika ity, satria marihan'ny Antoko Kaomionista Sinoa ho toy ny fahombiazana mialoha ho an'ny hetsika ara-politia ireo fitokonana nisesisesy nataon'ny mpiasan'ny làlamby tamin'ny taona 1992.
Mpisolovava iray monina ao Changshan, Gan Yuan Chunu  dia nizara ny vaovao miaraka aminà sary iray :
Sarin'ny Sina weibo avy amin'i Gan Yuanchun
Naitanisa ny tatitry ny BBS (vaovao anaty aterineto) ilay mpisolovava hoe nanodidina ny 300 ireo mpiasan'ny làlamby nanao fitokonana tao amin'ny garan'i Changshan. Tsy nazava tsara ny niteraka ny fitokonana. Gazety iray ao an-toerana,‘Daily Economic News’  no nanaraka ny tantara ary nilaza fa ny fitokonana dia niantomboka tamin'ny fifamalian'ny mpiasa madinika momba ny fanovàna ny maro tamin'ireo talen'ny zotra fitaterana mpandeha tao amin'ny Sampan-draharaha tao Zhuzhao nataon'ny Guangzhou Railway Corporation. Na dia izany aza anefa dia mbola marihan'ireo mpampiasa aterineto ny firotsahan'ireo mpiasan'ny fitaterana an-dalamby amin'ny pôlitika teo amin'ny tantaran'ny Repôblika Entim-bahoakan'i Sina. Ao anatinà resaka mifampitohy  an'i Gan Yuanchun :
@hampan Ho miaramilan-tsisintany indray mandeha indray va re ireo mpiasan'ny lalamby? ( 3 Aogositra 9:17 alina).
@154233735 Nandray anjara tamin'ilay fitokonan'ny mpiasan'ny làlamby ny dadabeko. Toy ny fiverenan'ny tantara ihany izy ity…(3 Aogositra 9:11 alina)….
@linhhao888 mamaly an'i @Nethuhz: Nihetsika ny mpiasa, ka tokony anjaran'ny mpianatra indray ny manaraka. (3 Aogositra 8:45 alina).
Ity lahatsoratra ity dia niaraha-nanoratra tamin'ny Oiwan Lam 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/15/20909/
 dia tsy afa-po: http://www.reuters.com/article/2011/08/02/china-strike-idUSL3E7J21TA20110802
 Garan'i Changsha: http://en.wikipedia.org/wiki/Changsha#Rail
 Gan Yuan Chunu: http://weibo.com/1952722131/xhMdu0JnR#a_comment
 anatinà resaka mifampitohy: http://weibo.com/1952722131/xhMdu0JnR